Roborock S7: Nhicha ụlọ dị elu na mkpocha ultrasonic | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 18/04/2021 16:00 | General, Nyocha
Robot agụụ hichaa toro na-aba na ike karịrị oge, nke malitere dị ka a ngwaahịa na dịtụ-enyo enyo arụmọrụ, na-a ngwaahịa ike nke na-eme ka ndụ anyị mfe, karịsịa mgbe ọ na-abịa ika. Roborock, ọkachamara na robot nwere ọgụgụ isi dị elu.
Chọpụta anyị ihe niile bụ akwụkwọ ọhụụ ya ma ọ bụrụ na ọdịiche dị n'etiti ndị na-ehichapụ robot dị elu karịrị ọnụ ahịa, ọ ga-aba uru n'ezie?
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ oge ndị ọzọ, n'oge a kwa anyị kpebiri itinye vidiyo na nyocha anyị, naanị anyị kpebiri ịmepụta vidiyo "pụrụ iche" nke ị ga-enwe ike ịhụ karịa ihe nyocha dị mfe, ị ga-enwe nkọwa zuru oke na ozi gbasara nhazi nke ngwaọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Iji mee nke a, naanị ị ga-egwu vidiyo ebe ị ga-ahụ ozi niile nke okwu enweghị ike ịmalite n'onwe ha. Were ohere ịdenye aha na ntanetị YouTube ebe ị ga-ahụ ọtụtụ ọdịnaya ma nyere anyị aka ịnọgide na-eto eto.
1 Design: Ahịa ụlọ
2 Nkọwapụta Nka na ụzụ: Ọ dịghị ihe na-efu
3 Ngwa Roborock, uru agbakwunyere
4 Dị iche iche ihicha na scrubbing ụdịdị
5 Mmezi na nnwere onwe
Design: Ahịa ụlọ
Roborock na-eme ịkụ nzọ na ihe na-arụ ọrụ. Ebumnuche ya bụ ihe a na-amata nke ọma na nke ahụ enyela ya nnukwu afọ ojuju n'etiti ndị ọrụ ya. na n'ezie ọtụtụ ahịa. Enwere ọtụtụ mbipụta nwere ụdịrị yiri nke a, nke nwere onye na-ewepụta ihe dị n'elu, ihe gbara ọkpụrụkpụ ma toro ogologo na-agbakwunye yana ojiji abụọ ịhọrọ, ọcha ma ọ bụ oji. N'ezie, dị ka mgbe niile anyị nzọ na ihe plastik, atọ nhazi bọtịnụ na n'ihu etiti na Ikanam mmekọrịta na-agbanwe agba ya dịka ọrụ si egosipụta.
Akụkụ: 35,3 * 35 * 9,65 cm
Ibu ibu: 4,7 n'arọ
Anyị nwere mkpuchi azụ na mgbe ebuli ya na-egosi anyị tank siri ike na ihe ngosi WiFi. Na okpuru anyi nwere ihe nhicha nke etiti, onye na-eweputa ya, wheel kpuru ìsì na otu "onye nchịkọta", oge a nke silicone. Tankgbọ mmiri ahụ na nhazigharị maka padị scrub na-anọ n’azụ. A imewe yiri nke ahụ anya ruo ugbu a, ee, ogo nke mgbanwe na lIhe ndị a, nke na-eme ka anyị mara ngwa ngwa na anyị na-arụ ọrụ dị oke ọnụ ahịa. Anyị anaghị ahụ na ngwugwu ahụ, ee, ụdị ndochi ọ bụla maka ngwa nhicha.
Nkọwapụta Nka na ụzụ: Ọ dịghị ihe na-efu
Anyị na-aga ozugbo na ike ịmịkọrọ mmiri, otu n'ime ngalaba kachasị mkpebi mgbe ọ bịara dị iche na ụdị ngwaọrụ a. Ọ dịghị ihe na-erughị Paspọtụ 2.500 nke ahụ na-eme ka anyị mara ngwa ngwa na Roborock S7 a ga-enwe ike iji ụdị unyi niile dị iche iche. Iji chekwaa ihe ị chịkọtara, ọ nwere nkwụnye ego nke millilit 470 nke a na-amịpụta site n'elu ma nwee a HEPA nyo gbanwere ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Anyị nwere njikọta WiFi jikwaa ngwa gị, dabara na ya Alexa, Siri na Google Assistant. N'ikwu okwu ugbu a banyere mkpochapu ultrasonic, anyị na-elekwasị anya n'eziokwu na anyị nwere nkwụnye ego nke "naanị" 300 milliliters, nke anyị ga-ekwu maka ọzọ. Ọ dị mkpa ikwu na ọ ga-adaba na netwọk 2,4GHz WiFi iji gbasaa ebe ọrụ.
Anyị nwere pụtara pụtara na-ahụkarị Nchaji ojii maka ika, ya na akara ngosi ọnọdụ ya na eriri njikọ ike. N'ezie, ọ dịkarịa ala onye na-agbanwe ọkụ na-agbakwunye n'ime isi nke na-enye arụmọrụ zuru oke na arụmọrụ.
Ngwa Roborock, uru agbakwunyere
Software bụ akụkụ dị mkpa karịsịa. Nhazi ya nke mbu di nfe:
Budata ngwa ahụ (iOS / android)
Gbanwuo Roboorock S7
Pịa bọtịnụ abụọ nke Roborock S7 ruo mgbe WiFi na-enwu gbaa (ebe tank ahụ siri ike)
Chọọ site na ngwa
Tinye paswọọdụ maka netwọk WiFi
Ga-hazi ya na akpaghị aka
Ọ dị mfe iji Roborock S7 na-agba ọsọ. Na vidio anyị ị ga-ahụ ntọala dị iche iche yana ohere ịgbanwe asụsụ, ịhazi oge nhicha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ bara uru ịkọwa na ntinye ya ga-eme ka anyị nwee ike ijikwa map nke ụlọ anyị, dozie ọkwa atọ nke ike agụụ, atọ ọzọ nke ike ịmịcha mmiri na ọbụnakwa ịhazigharị ebe anyị chọrọ ka ehichaa ya.
Dị iche iche ihicha na scrubbing ụdịdị
Anyị na-amalite site na ọchịchọ, ọnọdụ nke anyị ga-ejikarị na nke na-eji ihe mmetụta LiDAR dị iche iche iji nweta arụmọrụ:
Ọnọdụ nkịtị: Ọnọdụ oriri dị ala nke na-ewetara ngwaọrụ ahụ ihe ruru awa atọ nke nnwere onwe.
Modedị nkịtị: Ọnọdụ ga-eme ka ngwaọrụ nwee ike gbanwee ike mmịpụta na-akpaghị aka dabere na nchọpụta nke unyi na kapeeti.
Bokpụrụ Turbo: Ihe dị ike ma na-eme mkpọtụ, ọkachasị akwadoro mgbe enwere unyi buru ibu.
Oke mode: Ọ na-eji 2.500 Pa nke ike, na-eme mkpọtụ nke ukwuu na anyị ga-asị na ọbụlagodi iwe, ee, agaghị enwe unyi nke na-eguzogide.
Banyere omume nke Roborock S7 na kapeeti Anyị nwere ike ịhazigharị n'etiti nhọrọ atọ dị iche iche: Zere ya; Ramming na deactivating scrubbing; Mee ka ike mmụba ahụ mgbe achọpụtara. M mgbe niile họọrọ ọhụrụ version na arụmọrụ kemgbe ahụkebe.
Ọtụtụ nhọrọ maka ultrasonic scrubbing nke juru anyị anya kpomkwem site otú o si arụ ọrụ. Nke ukwuu nke na anyị ga-akwado ya ọbụna maka parquet ma ọ bụ ala osisi, ihe nke na-etinye ihe ize ndụ na ngwaọrụ ndị yiri ya ruo ugbu a. Ọ ga-ama jijiji na ugboro ole ruo 3000 oge kwa nkeji. Ihe a niile dị anya na akwụkwọ ntuziaka na usoro nke seramiiki ala, mana n'echiche m ọ zuru oke maka ndozi kwa ụbọchị, ee, chefuo maka ịsachasị unyi a ma ama.
Kpụ ọkụ n'ọnụ kpụ ọkụ n'ọnụ
Ọ nwere ad300 mililita esite nke anyị chọrọ ichetara gị, ị nweghị ike ịgụnye ngwaahịa nhicha, ika ahụ n'onwe ya na-egosi na ọ nwere ike imetụta ike ngwaahịa a.
Mmezi na nnwere onwe
Dị ka ị maara nke ọma, ngwaọrụ a nwere akara mmezi na ngwa ya. Maka nke a, anyị ga-eburu n'uche nke ahụ HEPA nyo bụ nke nwere ike ịsacha nakwa na anyị ga-eji dochie ọtụtụ n'ime ihe ndị na-eri ngwa ngwa n'ime ọnwa isii. N'otu ụzọ, a ga-ahazi ihe nhicha ahụ:
Isi ahịhịa: Kwa izu
Akụkụ akụkụ: Monthly
HEPA iyo: Kwa izu abụọ
Ichapu akwa: Mgbe ọ bụla ojiji
Ndi ana-akpo na ihe mmetụta: Kwa ọnwa
Wheels: Kwa ọnwa
Banyere obodo, Ọ ga - adị iche n'etiti nkeji 80 na nkeji 180 dabere na ọnụọgụ ọrụ, nke a ga - enyere aka ịpịpụta 5.200 mAh site na batrị gị ruo na nke kachasị.
O doro anya na Roborock S7 a na-emezu ihe niile ekwere na nkwa, ihe enwere ike ịtụ anya na ngwaahịa nke 549 (AliExpress). Ihe nchacha ahụ ka dị anya site na ọdịnala ọdịnala na nrọ seramiiki, Otú ọ dị, nsị na arụmọrụ ya na ngwa dị mgbagwoju anya na-enyere ọtụtụ aka ịghọ otu n'ime ole na ole ndị na-ehichapụ robot na-enye afọ ojuju karịa isi ọwụwa. O doro anya na anyị anaghị eche ihu ngwaahịa ntinye, yabụ nnweta ya ga-achọ ịtụle mkpa anyị.
Ihe na: 18 April 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 17 April 2021
Ike mmịpụta dị elu na nhicha nhicha
Ozucha zuru ezu maka mmezi pallet
Oha obodo zuru oke maka ulo nke 90 m2 Aprx.
Agunyeghi ihe oriri na nkwakọ ngwaahịa
Mgbe ụfọdụ, ọ naghị agabiga oghere dị warara
A oké mkpọtụ mkpọtụ na elu ike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Roborock S7: Nhicha akwa dị elu ugbu a na ntanye ultrasonic